वडा नम्बर २१ मा खानेपानीसंगै रोजगारीको खाचो, के भन्छन् वडाअध्यक्ष ठकुरी ? – युवा अभियान
वडा नम्बर २१ मा खानेपानीसंगै रोजगारीको खाचो, के भन्छन् वडाअध्यक्ष ठकुरी ?
obhadnari — २०७४ पुष ९, आईतवार ०८:५४0comment
९ पुष, सिमरा । सुप्रिया ढकाल ।
बारा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालीका वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर ठकुरीले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा वडाबासीको लालपुर्जा र खानेपानी रहेको बताएका छन् । न्युज एक्स्प्रेश अन्तर्गत जनप्रतिनिधिसंगको कुराकानिमा वडाध्यक्ष ठकुरीले चुनावी एजेण्डा र ब्यवहारीकतामा ठूलो भिन्नता हुने स्विकार गरे ।
वडाबासीको सबैखाले समस्याको समाधान जिम्मेवारी पाएलगतै गर्ने सोच बनाएका अध्यक्ष ठकुरीले कानुनि तवरले कदम चाल्दा सोचेजती काम गर्न नसकेको बताए । बिस २०६८ सालको जनगणना अनुसार ६ हजार ४ सय २४ जनसंख्या रहेको वडा नम्बर २१ मा अधिकांश सबै ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्ने निम्न आयस्तर भएकाहरु छन् । ति वडाबासीको समस्या सम्बोधन गर्न आगमि करिब चार बर्ष पुरा मेहेनत गर्ने ठकुरीले प्रतिबद्धता जनाए ।
चुनावी एजेण्डा जनतामा पस्किदै गर्दा देखाएका आशाहरु स्मरण गर्दै उनले भने, “समस्या त धेरै छन् । सबैभन्दा पहिले यो ५ बर्षे कार्यकालमा कमसेकम यहाका जनतालाई नम्बरी लालपुर्जा दिनपाए कार्यकाल सफल हुने थियो ।”
जादुको छडि घुमाएको जस्तो सजिलो सोचेका छन् जनताले पनि के त्यस्तै हो ? भन्ने प्रश्नमा ठकुरीले (मुस्कुराउदै) भने “हैन, हामीले पनि त्यस्तै सोचेका हौँ, सपना बाडेका हौँ । तर त्यसो रहेनछ । जादुको छडि घुमाएजस्तो त हैन । तर कानुनी तवरले अघि बढ्दा बिस्तारै सबै समस्या समाधान हुदै जान्छ जस्तो लाग्यो ।”
चुरेको फेदैमा रहेको यस वडामा युवाहरु समेत रोजगारीको अभावमा यत्रतत्र लागेका छन् । पछिल्लो समय केहि सरकारी कर्मचारी तथा ब्यवसायीहरु आएर बस्न थालेपनि अधिकांश सबै दाउरा बेच्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने तथा सवारी चालकहरुको बसोबास छ । प¥याप्त सम्भावना बिच समेत अभावमा बस्नुपर्ने अवस्थाको चाडै अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।